Suuriyiinta oo ay ku adkaatey in ehelkooda lagula mideeyo Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Suuriyiinta oo ay ku adkaatey in ehelkooda lagula mideeyo Sweden
La daabacay onsdag 17 maj kl 09.57
Suuriyiinta oo ay ku adkaatey in Sweden eheladooda loo keeno
Wasaaradda arrimaha dibadda dalkaan Sweden. Sawirkii : JONAS EKSTRÃMER / TT
Soogalootiga ka yimid dalka Suuriya oo sharci ahaan xaq u leh in eheladooda loo keeno dalkaan Sweden ayaa dhib weyni waxay ka heysataa arrinkaas.
Waqtiga eheladoodu ay sugaan in wareysiyo dhankaas ku saabsan lala yeesho ayaa wuxuu qaataa muddo aad iyo aad u dheer.
Wasaaradda arrimaha dibadda dalkaan Sweden ayaa bishii janaayo ee la soo dhaafey waxay soogalootiga suuriyiinta ah u sheegtey in eheladoodu ay tagaan safaaradda dalkaani ku leeyahay magaalada Khartuum ee caasumadda dalka Suudaan si halkaas qoysaskooda looga qaado wareysiyada lala yeelanayo laakiin sidaas oo ay tahay waqtiga wareysiyadaas la sugo ayaa ah mid qaadata muddo aad iyo aad u dheer, sida lagu ogaadey baaritaano ay sameysey waaxda wararka ee idaacadda dalkaan Sweden.
Patric Nilsson oo ka hawlgala wasaaradda arrimaha dibadda dalkaan Sweden ayaa qirey in xaalka arrinkaasi yahay mid aan caadi aheyn, wuxuuna yiri isagoo arrinkaas ka hadlaya:
- Kuma faraxsanin sida xaalka arrinkaasi hadda yahay, ayuu yiri Patric Nilsson oo ka hawlgala wasaaradda arrimaha dibadda dalkaan Sweden.
Dadka Suuriyiinta ah ee dalkaan Sweden sharciyada dhawaanahaan ka heley ayaa xaq waxay u leeyihiin in eheladooda iyo qaraabadooda dibadda uga maqan dalkaan loo keeno, laakiin waxaa eheladooda khasab ku ah in wareysiyo lagula yeesho mid ka mid ah safaaradaha dalkaani ku leeyahay dalalka dibadda.
Mushkiladaha ehelada dadkaan soo foodsaartey ayaa ah in ay ku adkaatey in ay galaan dalalkii dalkaan Sweden u sheegey in eheladaasi tagto si wareysiyo halkaas looga qaado.
Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa dadkaas suuriyiinta ah ee sharciyada dalkaan ka heley kula talisey in eheladoodu tagaan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan maadaama dadka reer suuriya dalkaas ku gali karaan bilaa fiiso.
Waqtiga wareysiyadaas la sugo ayaa eheladaas ku qaata muddo aad u dheer oo qiyaastii badanaa qaadata ilaa iyo siddeed bilood.
Haddii safaaradda dalkaani ku leeyahay dalka Suudaan aysan xaalka si kale u maareyn , waxay qoysaskaas wareysiyada sugaya ku dhammeyn kartaa ugu yaraan muddo laba sanadood ah.
Patric Nilsson oo ka hawlgala wasaaradda arrimaha dibadda dalkaan Sweden iyo mar kale:
- Shaqaale dheeraad ah ayaanu hadda safaaraddaas ku xoojiney, sidoo kalana waxaanu ku xoojiney shaqaale aanu dalkaas gudihiisa ka qoraney, waxaan kaloo damacsanahay in aan dalkaan ka dirno shaqaale aan hawsha safaaraddaas ku xoojineyno, ayuu yiri Patric Nilsson oo ka hawlgala wasaaradda arrimaha dibadda dalkaan Sweden.